Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguArla B
Le yisuite esanda kulungiswa yomgangatho ophantsi kamamazala ebekwe kwicala lolwandle lwe-Hwy 98 kwisiphelo esiseNtshona saseMexico Beach. Iyunithi inegumbi lokulala eli-1 elinebhedi enkulu, igumbi lokuhlambela eli-1, kunye nezimbini ezakhiwe kwiibhanki. Ikwanayo nekhitshi elincinci elivuleleke kwindawo yokuhlala. Intendelezo ngasemva kwekhaya yindawo entle yokuphumla. Kukho igrill yegesi, itafile, iambrela, kunye nezitulo zokuphumla ukuze uzonwabele. Izithuba zangaphandle kwabelwana ngazo nam, kodwa awufane undibone phaya ezantsi.
Akukho zilwanyana zasekhaya, nceda. Iqula elisecaleni komnyango likwipropathi yabucala, kwaye ayisetyenziselwa iindwendwe. Nangona kunjalo, ulwandle lumalunga neemitha ezili-100 ukusuka emnyango wakho kunye neGulf of Mexico elinde ukuba uthathe idiphu. Akukho bahlanguli emsebenzini!
Ulwandle lwaseMexico luya kuba kwinkqubo yokwakha kwakhona iminyaka ezayo, kodwa uninzi lwamashishini ethu sele ebuyile. Ikofu yeCaribbean kunye neRustic Sands indawo yenkampu zivulekele isidlo sakusasa. I-Killer Seafood isebenza ngokuguquguqukayo kwindawo yayo yokuqala kunye nelori yokutya entsha enomtsalane, kunye nezihlalo zangaphandle ezigqunyiweyo. IMango Marleys iphinde yavulwa. Iilori ezininzi zokutya eMexico Beach zibonelela ngokutya okumangalisayo. Iindawo zokutyela neevenkile zasePort St Joe zonke zivuliwe ngaphandle kwezo beziphambi kolwandle. Ivenkile ethengisa utywala kunye nevenkile ethengisa ukutya ivuliwe kwi-15th Street.
Iitshatha zokuloba ziyafumaneka ngokubanzi, kwaye kukho izinto ezininzi ezinomtsalane zohambo lwemini ngaphakathi kohambo olufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Arla B
Uninzi lweendwendwe ziya kungena nam ngqo, kwaye ndiya kuba sendlwini ixesha elininzi.
Ubume beSuperhost bubaluleke kakhulu kubabuthi be-airbnb. Ukuba ufumana nantoni na enqongopheleyo, nceda uqhagamshelane nam ngqo. Ndiza kwenza zonke iinzame zokulungisa nawuphi na umba.
Ubume beSuperhost bubaluleke kakhulu kubabuthi be-airbnb. Ukuba ufumana nantoni na enqon…
UArla B yi-Superhost